Iimali eziphezulu ze-Forex kwiRhwebo kwi-2019 - iiPrayimari eziPhambili zeMarike kwi-Forex Trading
Iimali eziphezulu ze-Forex kwiRhwebo kwi-2019 - Eyona ndlela ihamba phambili kwiParents Currency
Iziganeko ezisisiseko ze-EUR / USD yokurhweba
Amandla amabini awona mkhulu kakhulu kwezoqoqosho kwihlabathi aqinisekanga ukuba yiYurophu Yomanyano kunye neUnited States of America. I dollar, ebizwa ngokuba yiGreenback, iyona mali ehamba phambili yehlabathi kunye neyona nto ibanjwe kakhulu, eyenza i-EUR / USD ibini elidumileyo kunye nelokuthengisa.
Ngenxa yokuqhubeka kwayo kwerhafu, lo mbini unikela ukusasazeka okuphantsi kakhulu njengento yokuqala yokwenza umthengisi ofuna inzuzo ekutyala imali kwiimarike zemali. Izigqibo zorhwebo ezinolwazi kunye neendlela ezahlukeneyo zoqhagamshelwano zingasetyenziselwa kule mbini, ngenxa yesityebi esinobutyebi bezoqoqosho kunye nolwazi lwezemali oluchaphazela ulwalathiso lwexabiso lentengiso. Ngoko ke, kuninzi amathuba okuvula ukwenza inzuzo enkulu yemali evela kwinqanaba eliguqukayo lokungazamiyo le nto ibonakala.
Ukhokelo lwexabiso le-intengo ye-intengo ye-EUR / USD lilawulwa ngamandla okuthelekiswa kwezi zimbini eziphambili kwezoqoqosho. Ukucaciswa nje, ukuba zonke ezinye izinto zihlala zihlala njalo kwaye uqoqosho lwaseMerika lubhalisa ukukhula ngokukhawuleza, kuya kwenza iDola ukuqiniswa ngokubhekiselele kwiYurophu ebuthathaka. Ukuchasene kuyinyani ukuba i-Eurozone ihlangene nokukhula koqoqosho lwayo, okuya kubakhokela i-Euro kwilizwe elomeleleyo, xa kuthelekiswa neDola eliya kuncipha.
Enye yeempembelelo ezinkulu ekutshintsheni kwamandla enxulumene nomlinganiselo yinqanaba lezala. Xa amaxabiso omdla wemali yaseMelika anamandla kunabo boqoqosho oluphambili lwaseYurophu, lugqithisela imali eqinile yase-US malunga neYurophu. Ukuba ixabiso lentengo kwi-Euro liqinile, iDola ngokuqhelekileyo iyancipha. Emva kokutsho oku, iirhafu zenzalo kuphela aziyikunyanzelisa ukunyuka kwexabiso lemarike yemali.
I-dynamics ye-EUR / i-USD ilawulwa kakhulu yi-Eurozone yokungazinzi kwezopolitiko, njengoko kuyinyaniso eyaziwayo ukuba i-Eurozone yindawo yokuvavanya imigaqo-nkqubo yezoqoqosho kunye nemali. Uluhlu lweenguqu ezingalindelekanga kunye neentlukwano phakathi kwamazwe aqulethe i-akhawunti ye-EU kwiDolala enamandla kwiYurophu.
Ezi ziimpawu zokurhweba ze-EUR / USD ofuna ukuzazi ngaphambi kokuba utyalomali kwiqela elithandwa kakhulu kwimarike.
Iinkalo eziphambili ze-GBP / USD yokuthengisa
I-GBP ekwabizwa ngokuba yiChetshi, iBritish Pound okanye i-pound sterling, ithambekele ekuthengiseni ububanzi phakathi kwelanga. I-GBP / USD iyaziwa njengeyona ndlela ephosakeleyo kunye neyintlekelekanga njengokuba akuqhelekanga ukubona ama-alarms amanga kunye nokunyanzeliswa okungaqinisekiyo. Ukuba utshintsho olungabonakaliyo kwintengo yalo kukukhanga kakhulu kumava abahwebi kunye ne-investing inzima kakhulu kubaqalayo.
Ukusetyenziswa koPhando lwezobuGcisa kunye neendaba eziphambili ezivela kwi-United Kingdom kunye ne-US zizathu eziqhelekileyo zokuthengisa ezo zibini ngendlela enolwazi olukunceda ukwandisa amathuba okufumana inzuzo. Kukho iingcebiso ezintle ezifunekayo ukuba uziqwalasele xa ukhetha ukuthengisa i-GBP / USD. Ukwakha isicwangciso esichengileyo sokurhweba esekelwe ukuhlala uhlala ungenelele kwiindaba zoqoqosho zombini ngokukhethekileyo ukuchonga nokugcina ukukhutshwa kweendaba ezingalindelekanga ezingabangela ukuziphatha okungahambiyo kwintengo yexabiso lemarike.
Iziganeko ezisisiseko ze-USD / JPY yorhwebo
I-yen eyona mali eyona mali kakhulu kulo lonke uqoqosho lwe-Asia nayo ifom ye-proxy yokukhula koqoqosho lonke lwase-Asia. Xa ukungazinzi kubonwa kwinqanaba lase-Asia, abahwebi ngokubanzi baphendula ngokuthengisa okanye ukuthenga i-yen njengendawo yokubuyisela kwezinye iintlobo zemali zelizwe laseAsia ezingekho lula ukuthengisa. Kukwafanelekile ukukhankanya ukuba uqoqosho lwaseJapan lubhalise ixesha lokurekhoda kwezoqoqosho kunye nezenzalo eziphantsi. Xa kuthengiswa i-USD / JPY, isalathisi esikhokelayo salo ulwalathiso lwamaxabiso esizayo ngumnotho waseJapan omele siwuqwalasele.
Uninzi lwezibonda zengqungquthela ziyabona indima echaphazelekayo yeYen ekuthengiseni. Ngenxa yomgaqo-nkqubo we-intanethi ophantsi kakhulu weJapan oye wabamba ininzi ye-1990 kwi-2000, abahwebi baboleke imali yaseJapan ngexabiso elincinci kwaye basebenzisa ukutshala imali kwezinye iirhafu ezifanelekileyo. Oku kuvelisa inzuzo kumanqanaba emilinganiselo.
Ngaloo ndlela kumhlaba wonke, ukuboleka rhoqo kwe-Yen kubonisa ukuba uxabiso lokuba ngumsebenzi onzima. Nangona kunjalo, i-Yen ithengisa ngeendlela ezifanayo ezisisiseko njengoko nayiphi na enye imali.
Enye yeempembelelo ezinkulu ezibonakalayo kwixabiso lemali yaseJapan yi-US Dollar. Ukuziphatha okungaqondakaliyo isizathu sokuba abathengisi be-forex basebenzise uhlalutyo lobugcisa ukuze baqonde ukuguquguquka kwale mibini, kwixesha elide. Izigaba zokurhweba rhoqo ziyahlukahluka kwi-30 okanye i-40 pips ukuya phezulu njenge-150 pips.